Fitbit Versa, waa fitka cusub ee Fitbit loogu talagalay dadka xidhan | Wararka IPhone
Labadii sano ee la soo dhaafay, Fitbit wuxuu arkay booska koowaad ee iibka aaladaha tirinta si loo cabiro jimicsigeena jirka, milkiileyaasha la beddelo. Fitbit wuxuu hogaaminayay qaybtaan sanadihii la soo dhaafay, laakiin furitaanka Apple Watch iyo gaar ahaan Xiaomi MiBand 2 awgeed, ayaa loola jeeday hoos u dhac weyn oo ku yimid iibinta alaabada balaaran ee Fitbit.
Dhowr usbuuc ka hor ayaan ku celcelinnay daad aan arki karnay sida shirkadda soo socota ay ula mid tahay Apple Watch. Shirkadda ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay smartwatch cusub oo loogu magac daray Versa, smartwatch oo qiimahiisu yahay $ 199,95, oo ka fog 349,95 ee Fitbit Ionic leeyahay, qaabka ugu dhameystiran shirkadda.
Sida aan arki karno, Fitbit Versa waxay na siisaa wax ka badan macquul macquul ah Apple Watch Apple, oo leh naqshad laba jibbaaran oo dhinacyo wareegsan leh. Waxay ka samaysan tahay aluminium anodized ah waxaana lagu heli karaa madow, ubax dahab ah iyo dhuxul (cirro). Waxa kale oo ay na siisaa tiro badan oo xarkaha ah si loo habeeyo smartwatch si markaa isbarbar dhig nooc kasta oo dhar ah oo aan xirano iyo xaalad kasta.
Fitbit Versa, wuxuu isku daraa a dareeraha garaaca wadnaha ee shaqeeya 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii. Markii aan ka jawaabeyno ogeysiisyada, qaabkani wuxuu na siinayaa jawaabo deg deg ah oo horay loo sii dejiyey oo aan qaabeyn karno, in kasta oo ay la jaanqaadi karaan oo keliya barnaamijka 'Android' iyadoo loo marayo dalabka shirkadda, maaddaama Apple uusan siineynin xorriyadda la falgalka heerkaas. waxaa kaliya loo heli karaa Apple Watch.
Sida astaamaha, Fitbit Versa wuxuu isku daraa qalab NFC ah inaad awood u yeelatid inaad lacag ku bixisid adoo adeegsanaya smartwatch oo wata Fitbit Pay, adigoon wadan smartphone ama lacag kaash ah. Qiimahaas, Fitbit Versa ma laha qalab GPS, laakiin waxaan u isticmaali karnaa GPS-ka casriga ah si aan ula soconno dhaqdhaqaaqa banaanka. Shixnadaha ugu horreeya waxaa la samayn doonaa bil gudaheed laakiin laga bilaabo berrito waxaad horay ugu sii haysan kartaa Fitbit.com.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Fitbit Versa, waa fitnada cusub ee Fitbit ku leedahay wearables
Waxaan haystay dhagax dixeed oo imika waxaan isticmaalaa wakhti jiilaal ah, waxay buuxisaa dhamaan baahiyadayda, aniga ahaanna waa midka ugu qiimaha fiican ee smartwatch ee abid jiray, shaki la'aan, waxay leedahay dhibaato weyn oo ay la wadaagto fitbit-kan . Qalabkan 'Fitbit smartwatch' uma muuqdo mid xun laakiin waxaan caddaynayaa in saacadayda xigta ay noqon doonto saacad tufaax ah. Anigoo ah macruufka macruufka ah waan ka daalay la kulma la'aanta isticmaalka aaladahaan.
Baahin baahsan, mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee lagu dhagaysto barnaamijyada, ayaa lagu cusbooneysiiyaa warar xiiso leh